बिर्सन्छ कसरी ?
शिव प्रकाश, (बोष्टन)
विर्सेर फेरि सम्झियो आज बिर्सन्छ कसरी ?
लुकाइ काँडा फुल्दछ फूल देखिन्छ कसरी ?
चिनिन्छ जब मान्छेको मन लाग्दैन सम्झन
फुटे झैं फोका फुट्दछ भाग्य लेखिन्छ कसरी ?
उपहार एउटै दिएर जान्छ अन्ततः मान्छेले
सौगात भनी घात नै आखिर खै दिन्छ कसरी ?
चोरको बैरी चन्द्रमा भयो के दोष जुनको
शत्रु नै मित्रु, मित्रु नै शत्रु चिनिन्छ कसरी ?
बस्दैन चरी रूखमा रित्तो फलको आसले
डडेलो लाग्या वनमा मृग भेटिन्छ कसरी ?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />